युगसम्बाद साप्ताहिक - जागीरको तीन महिना म्याद थपियो !
Tuesday, 10.15.2019, 07:10pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 05.30.2011, 03:48pm (GMT+5.5)
अहिले अन्तिम घडीमा आएर रातारात अन्तरिम संविधान २०६३ मा म्याद थप्ने द्रबिड प्राणायाम गरियो । ‘दिनभरि ..... कपालकोर- राति .... घोचा चोर’ उखान चरितार्थ पार्दै पाँच बुँदे सहमतिका नाममा नवौं संशोधन गरिएको छ । तीन महिनाका लागि म्याद थपेर चार वर्षको काम गर्न सकिन्छ भने चार वर्षको समय किन खेर फालियो ? त्यो अमूल्य समय र साधनको दुरुपयोगको जिम्मा कसले लिने ? छ महिनामा लडाकु समायोजन गरिसक्ने भनेर चार वर्षको समय बर्बाद पारिनुलाई जनताले नेताहरुको चरम सत्तालोलुपता र बेजिम्मेवारीको उदाहरण मानेका छन् ।
संविधान बनाउने मूल्यवान समय कुर्सीका खेलमा रमेर बिताइयो । ‘मुरी छोडेर मानाको पछि’ भनेझैं राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय चिन्ह र संविधानको नाम जस्ता निर्विवाद विषयमा पनि विवाद झिकेर समयको दुरुपयोग गरियो । यसबाट नेताहरु मूल विषयप्रति कति असचेत एवं उदासिन रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । कानुन नियममा समावेश गरे हुने फुटकर विषय समेत संविधानमै लेख्नुपर्छ भनेर अड्डी र ढिपी लिएर समय लम्ब्याउँदै जानु सोचाइको संकीर्णता र अपरिपक्वता अथवा स्वार्थ एवं षड्यन्त्रकै प्रच्छन्न तानाबाना पनि भन्न सकिन्छ ।
आफ्नो ढङ्ग नपुगेर बिग्रेको स्थितिलाई नेताहरु ‘विदेशी हस्तक्षेप’ भनेर चोखा देखिन खोज्छन् । कूटनीतिक दक्षताबाट व्यवहार गर्न नजान्ने अनि ‘हस्तक्षेप’ भनिरहने सुहाउने कुरा होइन । विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्नेहरु नै फेरि विदेशीकै गुलियोमा रमेका देखिन्छन् । नेपालका नेता, यहाँका सरकार, यहाँको शासन सबै आईएनजीओ मार्फत बाहिरियाकै इशारामा नाचिरहेको स्थिति छ । अहिले थपिएको तीन महिने म्याद पनि सम्भवतः बाह्यशक्तिकै इशारामा खचपचिन पनि सक्छ भन्नेतर्फ पनि सचेत नहुने हो भने यो म्याद थप पनि ‘मूतको न्यानो’ नहोला भन्न सकिंदैन । ‘धन भए तँ बर्जु जोई’ भनेझैं गैरसरकारी संस्था यहाँ सलबलाइरहेकै हुनाले ब्वाँसाले कन्याएर आन्द्रा भुँडी थुतेझैं भयो भनेर र अहिलेको सहमति पनि पूर्वसहमतिहरुसरह भयो भने आश्चर्य हुने छैन । यो म्याद थप तीन महिने जागीरको म्याद थपेजस्तो पो हुने हो कि भन्ने शंका यथावत् नै छ ।
गोप्य सम्झौता गरेर प्रचण्डले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँदा ‘विदेशी हस्तक्षेप तोडें’ भनेका थिए, तर स्थिति समाल्न सकेनन् । मुखले एकथोक भन्ने र भित्र स्वार्थको कलुष राखेर व्यवहार गर्दा आफैंले विगारेको भन्न लाज मानेर अरुलाई दोष दिनु नेतालाई सुहाउँदो कुरा होइन । यहाँ भड्काउने र विगार्ने काममा सबै दक्ष छन्, तर सपार्नेमा भने आफूलाई फाइदा भए मान्ने, नत्र नमान्ने बानी बेहोरा कसैले पनि छाड्न सकेका छैनन्, स्वार्थ बाहेक देश र जनताप्रतिको निष्ठा पटक्कै नदेखिनु त्यसैको परिणाम हो ।
संविधान बनाउने नाममा आ-आफ्नै स्वार्थमा अल्झेर तीन वर्षे कार्यकाल खेर फालेको देख्दा ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेझैं अहिले थपिएको ३ महिनामा गर्ने भनिएको काम हुन्छन् भनेर जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । संविधानलाई दलको अनुकूल होइन, देश र जनताका लागि बनाइने हो भने दलहरुसंग असम्वद्ध विज्ञहरुद्वारा बनाउनपर्छ र त्यसलाई निर्वाचित संसद्मा विमर्श गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि निष्पक्ष व्यक्तिहरुको छोटो छरितो मन्त्रिमण्डल बनाइनुपर्छ । नत्र सत्तारुढहरुबाटै निर्वाचन गराउँदा सरकारी संयन्त्र र साधन सत्ताधारीकै पक्षमा परिचालन भएर निष्पक्षताको आशा गर्न सकिंदैन । अबको तीन महिनापछि पनि गतिलो संविधान नबन्नु निश्चित छ । त्यसले त्यसपछिको सो सेतो हात्तीलाई विदा गरेर विज्ञहरुकै आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था आउने छ ।
वर्तमान संविधानसभा समानुपातिकका नाममा घुरान बटुलेर बनाइएकाले त्यसले संविधान बनाएन भन्नु र हिंजडाले बच्चा जन्माएन भन्नु उस्तै उस्तै हो । जसको जस्तो योग्यता छ, त्यस्तै गर्ने न हो । त्यो त उनीहरुले गरिरहेकै छन् । कसैले रातो राहदानी बेचेका छन्, कसैले हुकिङ गरेर बिजुली चोरेका छन्, कसैले जागीर लगाइदिन्छु भनेर घूस खाएका छन्, कसैले जाँच दिन आफ्नो सट्टा छोरी पठाएर लेखाएका छन् इत्यादि । त्यसैले यो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भैसकेको अवस्थामा तीन महिने म्याद थपिएको छ, तापनि त्यसपछि आयोगद्वारा संविधान बनाउने र स्वतन्त्र मन्त्रिमण्डलद्वारा संसद्को निर्वाचन गराउनु नै उचित समाधान हुनेछ ।
यहाँ हरेक नेता, दल र सरकार ‘नयाँ नेपाल’ भनेर थाक्दैनन्, तर उनीहरुको साँठगाँठ अपराधी, तस्कर र भ्रष्टहरुसित रहेको देखियो । सभासद् नै भागवण्डामा सेठ, साहुकार, बैंकमारा, भ्याट छलुवाहरुलाई मनोनित गरेका छन् । जनता साह्रै सोझा हुनाले त्यसैको नाजायज पाइदा उठाउने प्रपञ्च भएको छ ‘नयाँ नेपाल’को नारा । यहाँ भन्दैमा पत्याउने स्थिति अब रहेको छैन । तीन महिनाको म्याद थपे पनि जनताले विश्वास गरेका छैनन् । किनभने यहाँ नेताहरुसित जनतालाई भन्ने एकथोक र आफूले गर्ने अर्कोथोक जनताले देखिरहेका छन् । सभासद्का लागि तीन महिना जागीरको म्याद थपिएको छ । ‘नयाँ नेपाल’ ठगिखाने थेगो भएको छ, गिज्याउने पर्याय भएको छ । अब तीन महिनापछिको रात पनि जेठ १४ गतेको रात जस्तै भयो भने आश्चर्य नमाने हुनेछ ।
यो पाँच बुँदाको गाजेमाजे सम्झौताका बुँदा आ-आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सुरु भैसक्यो । कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दैछ, तर झलनाथ आधार तयार नभै दिन्न भन्दैछन् । मसी नसुक्दै झगडा सुरु भैसक्यो । यो त ‘सुकाइदे गाँडभन्दा थपिदे गाँड’ पो हुनेभयो । हतियार नबुझाइ, सम्पत्ति फिर्ता नगरी, वाईसीएल विघटन नभै र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई संविधानसभाको म्याद थप्न दिन्नांै भन्ने कांग्रेसको अडान खोइलाको कटेरी सिद्ध भयो । रगतसित साटेको बन्दुक कुनै हालतमा बुझाउँदिन भनेर प्रचण्ड कड्केपछि कांग्रेसले घुँडा टेक्यो । पहिलोपटक प्रचण्डले गणतन्त्र घोषणा गर्न लगाएर गिरिजालाई घुँडा टेकाएका थिए भने यो दोस्रोपटक घुँडा टेकाइ हो । त्यसैले यो तीन महिने सहमतिले समाधानको सट्टा नयाँ गलफदी ल्याउने मात्र काम गरेको छ । यसका दुष्परिणाम चाँडै देखिनेछ ।